Fivorian'ny mpanadihady sivana hemodialisisin'ny vokatra vaovao SHINVA
Tamin'ny 1 aprily, ny fivorian'ny mpikaroka fitsapana ara-pitsaboana SHINVA sivana hemodialysis vokatra stratejika vaovao dia notontosaina tamim-pahombiazana tao amin'ny hopitaly Shulan (Provinsi Hangzhou). Ity fivoriana ity dia natao niaraka tamin'ny Hopitaly Shulan (Provinsi Hangzhou) ho ivon'ny fikarohana lehibe, Hopitaly Zhejiang Tongde, Jinhua City H ...
Handroso eo alohan'ny “drafitra dimy taona faha-14” i SHINVA
Ny drafitra dimy taona faha-14 dia noresahina ary nifanakalo hevitra tao amin'ny fivoriana faha-4 an'ny CPPCC faha-13 sy ny fizarana faha-4 an'ny NPC faha-13. Ity taona ity no fanombohan'ny drafitra dimy taona faha-14. SHINVA dia teraka nandritra ny Ady fanoherana ny Japoney, ary efa niaina sy nivelatra teo ambanin'ny drafitra dimy taona ...
SHINVA mitazona ny fivoriana momba ny fananganana fitondran-tena tsara sy ny tsy fivadihana politika ary ny ady amin'ny kolikoly
Ny tolakandron'ny 4 martsa dia natao ny fivoriana momba ny fananganana fitondran-tena tsara sy ny tsy fivadihana politika ary ny ady amin'ny kolikoly. Wang Yuquan dia mitaky ny hanohizantsika hanatsara sy hanatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, tsy maintsy manaraka ny fifehezana marina isika, manamafy ny ...
Mifantoha amin'ny fitsaboana ny fako ara-pahasalamana miaro ny fahasalaman'ny olona
Tao amin'ny "Forum momba ny fanariam-pako momba ny fako sy ny fivoarana ara-pahasalamana" tamin'ny 19 desambra 2020, SHINVA dia nifantoka tamin'ny fizarana ny fandrosoana sy ny fampiharana azo ampiasaina amin'ny rafitra fanariana fako ara-pahasalamana mifototra amin'ny fiara, ny Stor fitsaboana ara-pahasalamana manan-tsaina vetivety Stor ...
Tao amin'ny "Forum momba ny fanariam-pako momba ny fako sy ny fivoarana ara-pahasalamana" tamin'ny 19 desambra 2020, SHINVA dia nifantoka tamin'ny fizarana ny fandrosoana sy ny fampiharana azo ampiasaina amin'ny rafitra fanariana fako ara-pahasalamana mitaingina fiara, fiara fitateram-bola maloto manam-pahaizana ...
Tamin'ny 17 septambra, mpanao gazety iray avy amin'ny People's Daily, Xinhua News Agency, ny Radio Radio sy Television Station, Guangming Daily, Daily Daily ara-toekarena ary ireo haino aman-jery foibe hafa mijanona ao Shandong, ary koa ireo mpitati-baovao amin'ny faritra sy munisipaly avy amin'ny Gazety Mass. Grou ...
Studio Innovation 10 hafa ho an'ny zava-bita fanavaozana 156
Mba hanentanana bebe kokoa ny mety ho fanavaozana, hampiroborobo ny fifanakalozana sy ny fampandrosoana lalina ny asa fanavaozana faobe, Shinva dia nitana ny anaran'ny andiany faharoa an'ny studio fanavaozana ny mpiasa tamin'ny 8 septambra. Zhao Jun, sekretera lefitry ny antoko Shinva .. .
Tamin'ny 5 septambra dia nanao ny Plasma Sterilizer Training Course ny Sampan-draharaha Iraisam-pirenena.
Mba hanomezana tolotra tonga lafatra sy matihanina ho an'ny mpanjifantsika dia manatrika ity fampianarana ity ny mpiasan'ny varotra rehetra. Ny firafitry ny milina, ny fitsipika miasa ary ny lafiny rehetra dia ampidirina amin'ny antsipiriany. Hahafantatra zavatra matihanina ny tsirairay. ...
Amin'ny 8 Aogositra, ny Sampan-draharaha Iraisam-pirenena misahana ny asa fandraharahana dia mihazona ny Mazava ho azy Fampiofanana MOST-T sy MAST-A Fiofanana.